Sir Alex Ferguson oo kalsooni ku qaba in kooxdiisa Man Utd ay qaadi karto Champions League. - Caasimada Online
Home Warar Sir Alex Ferguson oo kalsooni ku qaba in kooxdiisa Man Utd ay...
Sir Alex Ferguson oo kalsooni ku qaba in kooxdiisa Man Utd ay qaadi karto Champions League.
Tababaraha kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa qaba inay xilli ciyaareedkaan kooxdiisu fursad weyn u heli doonto inay ku guuleysato Champions League hadii ay daafacyadeedu caafimaad qabaan.
United ayaa guuleystay labadeedii kulan ee furitaanka Group H ay kaga horyimaadeen Galatasaray iyo Cluj, laakiin daafacyadeeda dhaawac qaba ayaa muran ka keenay awooda kooxda iyadoo Nemanja Vidic, Chris Smalling iyo Phil Jones ay inta badan xilli ciyaareedka dhaawac ku maqnaanyeen.
“Waa niyad jab inaanan inta badan ku guuleysan Champions League, gaar ahaan mararka qaar waxaan filayaa inaan iska luminay,” ayuu u sheegay Daily Mirror.
“Laakiin ma diidi kartid. Inaad had iyo jeer aad ka fiirsato sanadka xiga. Kama dambeysta waxaa lagu qabanayaa Wembley xilli ciyaareedkaan waxeyna noo tahay fursad qaali ah.
“Hadii aan daafacyadeyda dib u heli karo, waxaan u heysanaa fursad qaali ah.”